DKMG: Dastuurka Ansixin Unbaa u Dhiman
Tuesday, June 18, 2013 Wakhtiga Geeska Afrika 08:12
DKMG ah ee Somaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in Guddiga Madaxa bannaan ee Dastuurka iyo Guddiga Khubarada Soomaalida ay Qabyo-Qoraalkii Dastuurka ku soo gabogabeeyeen waqtigii loogu talo galay ee aheyd 20kii April 2012.
Waqtigan ayaa ah mid waafaqsan Axdiga KMG ah, waqtiyeynta Roadmap ka iyo Heshiisyadii Garoowe iyo shirkii Somalida ee London.
Hadaba arintaasi ayaan ka wareysanay wasiirka dastuurka, arimaha Federalka iyo dib u heshiisiinta DKMG ah C/raxman Xoosh Jibri.
Wareysiga qeybta hoose ee qoraalkeenan ka dhageyso.
Madashan waa la xiray faallooyinka Qeybtan faallo kuma jirto. Adigu bilow inaad faallo halkan ku qortid Kulan: Dhalinyarada & Tahriibkavideo platformvideo managementvideo solutionsvideo player Dhageysiga Idaacaddaha